मनलाई कसरी शान्त, धैर्य तुल्याउने ? हनुमान चालिसामा लुकेको रहस्य (भिडियो सहित ) - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
मनलाई कसरी शान्त, धैर्य तुल्याउने ? हनुमान चालिसामा लुकेको रहस्य (भिडियो सहित )
प्रकाशित मिति: २० श्रावण २०७७, मंगलवार August 5, 2020
काठमाडौं । विश्वमा अहिले कोरोना भाइरस (कोविड–१९)को त्रासदी व्याप्त छ । सर्वत्र आजकल कोरोना महामारीको चर्चा छ ।
तथापि अरु समस्या, विपद् वा महामारीको जस्तै प्रभावको पहिले महसुस हुने, असर निरन्तर र निर्णायक रुपमा पर्ने भनेको हामी मान्छेको मनमा नै हो ।
मनमनमा तनाव, अनिश्चय, छटपटी, बेचैनी, डर, त्रास, भय र अशान्तिको राज फैलिएको छ । यो स्थिति सामना गर्न हाम्रो मन पनि सन्तुलित, स्थिर, शान्त र स्वस्थ राख्‍न आवश्यक हुन्छ ।
कोरोना, लकडाउन, आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी आदिले मान्छेमा चरम निरासा, शंका, भय, अनिश्चितता, क्रोध जस्ता मानसिक समस्या उत्पन्न गरिदिएको छ । चिकित्सा विज्ञान भन्छ, भय र क्रोधले हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई प्रभावित बनाउँछ ।
प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सन्तुलित बिग्रिएमा अनेकन रोगले च्याप्न सक्छ । अर्थात मानसिक विचलनले शारीरिक स्वास्थ्यमा सोझो हानी पु-याउँछ । अतः यसका लागि मनलाई कसरी शान्त, धैर्य तुल्याउने ? कसरी मनोबल उच्च राख्ने ? सोच्नुपर्नेछ ।
त्यसो त कतिपय धार्मिक विधी विधान, मन्त्र आदि हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ । त्यस्ता विधी विधान, मन्त्रोच्चारणले हामीलाई आत्मिक शान्ति दिलाउँछ । भय, क्रोध, आशंका जस्ता विकार हटाउँछ । यस्तै एउटा विधी हो, हनुमान चालिसा ।
भनिन्छ, आध्यात्मिक बलले नै आत्मिक बल प्राप्त हुन्छ र आत्मिक बलले नै शारीरिक बल प्राप्त गर्छ । यसरी वाह्य तथा भित्री रोगसँग लड्नका लागि शरीरलाई सक्षम तुल्याउँछ ।
प्रतिदिन हनुमा चालिसा पाठ गर्दा मन र मस्तिष्कमा आध्यात्मिक बल प्राप्त हुन्छ । पौराणिक पात्र हनुमान आफैमा बल एवं शक्तिको प्रतिक हुन् । हनुमान चालिसा पाठ गरिरहँदा बल एवं शक्ति प्राप्त भएको अनुभूत गर्छौं ।
नित्य हनुमान चालिसा पढ्दा पवित्रताको भावना विकास हुन्छ र हाम्रो मनोबल उच्च हुन्छ । मनोवल उच्च रह्यो भने सानोतिनो संकटले विचलित बनाउँदैन । हनुमान चालिसाको एक पक्ति छ, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दिन जानकी माता ।
अकारण तनाव वा भय हटाउँछ
हनुमान चालिसामा एउटा पंक्तिमा लेखिएको छ, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरन्तर हनुमत बीरा । बल बुधि विद्या देहु मोहिं, हरहू कलेस बिकार । अर्थात कुनैपनि प्रकारका रोग होस् बस तपाईं श्रद्धापूर्वक हनुमानजीको जप गर्नुहोस् । श्रद्धा वा विश्वासमा पनि ताकत हुन्छ । जब हामी सकारात्मक मनले कुनै कामना गर्छौं, हामीमा एक किसिमको शक्ति मिल्छ ।
नकारात्मक प्रभावबाट मुक्ति
हनुमान चालिसा पाठ गरिरहँदा तपाईंमा श्रद्धाभाव पैदा हुन्छ । मनमा सकारात्मक उर्जा जाग्छ । भय र बेचैनी हट्छ । यसले तपाईंको मनलाई स्थिर र शान्त बनाउँछ । सकारात्मक भावनाको विकास गराउँछ । सकारात्मक उर्जाले नै व्यक्तिलाई दीर्घजीवी बनाउँछ ।
नित्य हनुमान चालिसा पढ्दा हामीमा आध्यात्मिक बल, आत्मिक बल एवं मनोबल बढ्छ । यसले पवित्रताको भावना महसुष हुन्छ । शरीरमा हल्कापन महसुष हुन्छ । भय, तनाव, असुरक्षाको भाव हट्छ ।
अब आधुनिक युद्ध छोड्नुहोस !
अब आधुनिक युद्ध छोड्नुहोस ! ~~कविता- सिमा रोशी अब अन्तरंग छोड्नुहोस्! शक्तिले […]
धोका खानु भयो भने यसरी बदला दिनुहोस् ! धोकाको पीडालाई निको पार्ने प्रेरणा (भिडियो सहित)
"अरुले धोका दियो भनेर चिन्तित भइरहनु ,आफैलाई झन ठूलो धोका दिनु हो " : आचार्य राजन शर्मा श्वास रहेसम्म […]
अस्ट्रेलियाको समुद्री किनारमा फसेका ९० ह्वेल मरे, अलपत्र १८० को उद्धारका लागि प्रयास जारी
काठमाडौं उपत्यकामा ६४७ जना कोरोना संक्रमित थपिए
नेपालमा थप १३५६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ८२३ जना डिस्जार्च
कोरोना संक्रमणबाट थप २ जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या ४२९ पुग्यो
अष्ट्रेलियामा कोरोनाविरुद्ध भ्याक्सिनको लागि सरकारद्धारा थप ६ मिलियन डलर सहयोग